ikhaya/imiyalelo/Yenza i-USB bootable stick Windows 11
Ngaba uyayifuna intonga ye-USB ebhoboka yeWindows 11? Akukho ngxaki. IMicrosoft ibonelele ngesixhobo seWindows 11 seNdalo seMedia, apho unokwenza ngokulula isixhobo esiphakathi. Ngeentonga ze-USB ezinokukhuphela unokuzikhuphelela Windows 11, ikope kwintonga ye-USB kwaye uyiqale kamva. Kule miyalelo yenyathelo ngenyathelo siza kukubonisa ukuba uyenza njani intonga ye-USB.
1 Yenza i-USB bootable stick Windows 11
3 Khuphela isiXhobo seNdalo seMedia kwiMicrosoft
4 Vumelana nemigaqo yelayisensi
5 Khetha ulwimi nohlelo
6 Khetha intonga yememori ye-USB
7 Khetha intonga yakho ye-USB (idiski esuswayo)
8 IWindows 11 iyakhutshelwa kwaye kuyenziwa intonga ye-USB
9 Intonga ye-USB ebhobokayo yeWindows 11 ilungile
11 Inokukhutshelwa phi iWindows 11?
12 Kutheni le nto ufuna intonga ye-USB?
13 Ndingaqala njani ngentonga ye-USB?
Ukusukela oko Windows 11 yafumaneka, ezininzi Windows 10 iikhompyuter zithembele kwi Inkqubo entsha yokusebenza ihlaziyiwe. Ungathanda uku Phinda ufake kwakhona iWindows 11 ukusuka ekuqaleni, zisebenzisele oku kubonelelwe yiMicrosoft Isixhobo sokwenza imidiya.
Esi sixhobo sincinci silayisha Ifayile yeWindows yeWindows 11 phantsi kwaye wenze ifayile ye- Intonga ye-USB.
10 Windows Ifayile ye-ISO
Intonga ye-USB (ubuncinci i-8 GB)
Yenza i-USB eqalekayo yokufaka iWindows 11. Le ntonga ye-USB iyaqala kwaye unokuyiqala ikhompyuter yakho kwaye ufake iWindows 11 kuyo.
Khuphela isiXhobo seNdalo seMedia kwiMicrosoft
Ndwendwela Microsoft iwebhusayithi kwaye ucofe apha ngezantsi Ukudala imithombo yeendaba yofakelo lweWindows 11, kwi "Khuphella ngoku".
Vumelana nemigaqo yelayisensi
Funda isivumelwano selayisensi kwaye ucofe "Yamkela".
Khetha ulwimi nohlelo
Khetha ulwimi kunye nohlobo lweWindows 11 onqwenela ukuba nalo apha. Apha unethuba lokusebenzisa ukhetho olucetyiswayo lwePC yakho yangoku.
Khetha intonga yememori ye-USB
Ukuba ufuna ukufaka iWindows 11 kwisahlulelo esahlukileyo, kuya kufuneka wenze imithombo yeendaba kwaye uyiqhube ukuyifaka. Kukho ubuncinci I-8 GB iyafuneka.
Khetha intonga yakho ye-USB (idiski esuswayo)
Zonke zixhunyiwe Izinti ze-USB ziya kudweliswa. Khetha intonga yakho ye-USB kwaye ucofe kuyo ngaphezulu. Iifayile ezikwi-USB drive yakho ziya kucinywa. Ukuba ufuna ukugcina iifayile, eli lixesha lokuzigcina kwindawo ekhuselekileyo.
IWindows 11 iyakhutshelwa kwaye kuyenziwa intonga ye-USB
I-Windows 11 iya kukhutshelwa kwaye intonga ye-USB eqalekayo yeWindows 11 iyakwenziwa. Oku kungathatha ixesha elincinci. Ungaqhubeka nokusebenzisa iPC yakho. Xa yonke loo nto yenziwe, uya kuba nentonga ye-USB yofakelo olucocekileyo lweWindows 11.
Intonga ye-USB ebhobokayo yeWindows 11 ilungile
Kanye i Intonga ye-USB ugqibile, uya kufumana umyalezo wokuba ilungile. Ngoku unenye esebenza ngokupheleleyo 11 Windows intonga ye-USB eqalekayo.
Faka intonga ye-USB kwisixhobo ekujoliswe kuso, esinokuba yikhompyuter, ilaptop, umphandle okanye nayiphi na enye icwecwe elinezibuko le-USB.
Qala kabusha isixhobo
Gcina iF2, F8, F12, Del okanye i-ESC (kuxhomekeke kumvelisi) ukuze kuvele imenyu yokuqalisa.
Khetha intonga ye-USB.
Ikhompyuter yakho ngoku kufuneka iqale ngokukhutshelwa kweWindows 11ISO-Qalisa ifayile.
Inokukhutshelwa phi iWindows 11?
IWindows 11 inokukhutshelwa njengefayile ye-ISO simahla Microsoft khuphela.
Kutheni le nto ufuna intonga ye-USB?
Intonga ye-USB eqalekayo? Isetyenziselwa ukufaka iWindows 11.
Ndingaqala njani ngentonga ye-USB?
Kuya kufuneka usete ikhompyuter ukuze iqale ngentonga ye-USB. Ungalutshintsha ulandelelwano lwe-boot kwi-BIOS okanye ubize imenyu yokuqalisa ngeqhosha le-F2, F8, F12, Del okanye ESC2 (kuxhomekeke kumenzi) kwaye ukhethe i-Windows 11 eqala ngentonga ye-USB.
Windows 11 yabaqalayo kunye nabo batshintshayo: Inkqubo entsha yokusebenza esuka kuMicrosoft yabaqalayo kunye ... 9 ukalisho 14,95 yeEUR Thenga it e-Amazon
Windows 11 Izinto ezintsha - iWindows entsha icacisiwe. Kubaqalayo kunye nabasebenzisi abaphambili 3 ukalisho 9,95 yeEUR Thenga it e-Amazon
Phinda ufumane iifayile ezisusiweyo kwiGoogle Drayivu
Ayizizo zonke iidrive zenethiwekhi ezinokubuyiselwa
Amaxwebhu kaGoogle: Ngoku ngokuthathelwa ingqalelo kwentetho-nantsi indlela
IFirefox - Phinda wenze umyalezo "IFirefox iqala kancinci"
Vavanya isantya sedrive drive nge-cmd
Qamba kwakhona iifayile ezininzi ngaxeshanye
Qhagamshela kwindawo ethile kwividiyo ye-YouTube
Susa iiNtengiso zeSkype
IFirefox-Fihla "Iimpawu ezintsha kunye noTshintsho" kwimenyu ephambili